XOG: Ra’iisul wasaare Kheyre oo kulan xasaasi ah la leh xildhibaanada mucaaradsan xukuumadiisa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG: Ra’iisul wasaare Kheyre oo kulan xasaasi ah la leh xildhibaanada mucaaradsan xukuumadiisa
Warar ay si hoose warbaahinta Bulshoweyn uga heshay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta kulan albaabada u xiran ku yeelan doonaan ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo qaar ka mid ah xildhibaanada diiddan wasiirada uu dhawaan soo dhisay ra’iisul wasaaraha.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Villa Soomaaliya ayaa inoo sheegay in kulankaan uu dhici doono subaxnimadaan hore ee maanta, islamarkaana xildhibaanada kulanka la yeelan doonno ra’iisul wasaaraha ay tiro ahaan gaarayaan 30 mudane.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxyaabaha uu kala hadlaayo xildhibaanadaan waxaa kamid ah sidii ay u aqbali lahaayeen xukuumadda cusub, islamarkaana ay dib ula laabtaan wixii tabasho ah.
Qaar kamid ah xildhibaanadaasi ayaa ku doodaya in aanu ra’iisul wasaaraha marin wadadii saxda ahayd ee awood qeybsiga beelaha, sidaasi darteedna ay ku diiddan yihiin xukuumadda cusub.
Xildhibaanada hadda diiddan xukuumadda cusub ee uu 21-kii bishaan soo dhisay ra’iisul wasaare Kheyre ayaa tiro ahaan gaaraya illaa 70 xildhibaan, waxayna xildhibaanadaasi ku goodiyeen inay dib usoo celin doonaan golaha wasiirada marka codka kalsoonida ah loo qaadayo.
Illaa iyo haatan lama oga kulankaan maanta ka dhacaya Villa Soomaaliya waxa uu kusoo dhammaan doonno iyo sidoo kale waxa uu ra’iisul wasaaraha ku qancin doonno xildhibaanadaan.
Wixii warkaan kusoo kordha dib kala soco wararkeena kale Insha Allah.